Shiinaha kartoo Gaaban 4U warshad soo xigta warshad, warshad - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Hoyga > Gawaarida warshadaha > 4U jiifka warshadaha > Gawaarida warshadaha 4U gaagaaban
Gawaarida warshadaha 4U gaagaaban
Maaddadaï¼š1.0-1.2 mm qaro weyn oo xoog leh oo bir ah (SGCC); â â €
colourï¼š Qaybta hore waxaa lagu dubay budo madow, jirkuna ma ahan rinji;
Taageer motherboardï¼šSupport 12 "x10.5" iyo Hooyooyinka cabbirka yar yar;
Taageerada kaarka Taageer ilaa toddobo kaar oo heer-dhigis ah;
4u xakamaynta warshadaha
Shan faahfaahinta qaabeynta
FANKA 80 * 80 * 25MM
FANKA 120 * 120 * 25MM
1.0-1.2 mm qaro weyn oo xoog badan oo bir ah (SGCC);
Taageerada 12 "x10.5" iyo Hooyooyinka cabbirka Yaryar;
Taageer ilaa toddobo kaar oo caadi ah ku-xirnaanta;
Qaabeynta qaabeynta 1 badhanka korontada beddelka / badhanka badhanka dib udajinta 1;
Tusiyaha awoodda caadiga ah /adagwadidtilmaame / 2 * tilmaame xiriiriyaha shabakad;
Taageer korontada PS / 2 / koronto si xad dhaaf ah
L (446) * W (430) * H (176) mm, oo aan dhererkiisu haynin
Ikhtiyaar ikhtiyaari ahes
1. Hal albaab oo albaab ah – – ¡
2. Labo albaab oo albaab ah –
3. Kaarka saxaafadda hayaâ ¡
5. Xamili taagan â ¡
6. USB-da hore 2.0 * 1 + 3.0 * 1 - -
7. USB-ga hore 3.0 * 2 â – ¡
8. 12025 taageere, 2000 rpm, 4PIN, rollers doubleâ ¡\_
9. 8025 marawaxad, 2900 rpm, 4PIN, laba rollerâ ¡
10. Waddo tareen khaas ah oo loogu talagalay kontoroolka warshadahaâ ¡
Calaamadaha kulul: Gaaban 4U jiif warshadaha, Shiinaha, kartoo, xigashada, Warshad, Tayo
Gawaarida warshadaha 4U dheer
Dubitaanka Varnish 4U shaashadda warshadaha